Gedhi rekumabvazuva richaramba rakavharwa (1-3)
Mirayiro ine chekuita nevatorwa (4-9)
Mirayiro yevaRevhi nevapristi (10-31)
44 Akandidzosa nekugedhi rekunze renzvimbo tsvene rakatarisa kumabvazuva,+ uye rakanga rakavharwa.+ 2 Jehovha akabva ati kwandiri: “Gedhi iri richaramba rakavharwa. Harifaniri kuvhurwa, uye hapana munhu achapinda nepariri; nekuti Jehovha Mwari waIsraeri apinda nepariri,+ saka rinofanira kuramba rakavharwa. 3 Asi jinda ndiro richagara ipapo kuti ridye chingwa pamberi paJehovha,+ nekuti ijinda. Richapinda nepavharanda regedhi, uye richabuda nepagedhi racho.”+ 4 Akabva andipinza nepagedhi rekuchamhembe akandiendesa pamberi petemberi. Pandakatarisa, ndakaona kuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza temberi yaJehovha.+ Ndakabva ndapfugama, ndikadzikisa musoro wangu.+ 5 Jehovha akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, isa pfungwa dzako pazvinhu izvi, tarisa, unyatsoteerera zvese zvandinokuudza pamusoro pemirau uye mitemo yetemberi yaJehovha. Nyatsocherechedza masuo etemberi ekupinda nawo nemasuo ese ekubuda nawo munzvimbo tsvene.+ 6 Unofanira kuudza imba inopanduka yaIsraeri kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Imi imba yaIsraeri, zvinhu zvinosemesa zvamunoita zvazonyanya. 7 Pamunounza vatorwa vane mwoyo isina kuchecheudzwa uye vane nyama isina kuchecheudzwa munzvimbo yangu tsvene, vanosvibisa temberi yangu. Munouya nechingwa, nemafuta neropa pamberi pangu, asi muchiputsa sungano yangu nemabasa enyu ese anosemesa. 8 Panzvimbo pekuti muite basa renyu rine chekuita nezvinhu zvangu zvitsvene,+ munogadza vamwe vanhu kuti vaite mabasa emunzvimbo yangu tsvene.”’ 9 “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Hapana mutorwa anogara muIsraeri ane mwoyo usina kuchecheudzwa uye ane nyama isina kuchecheudzwa anofanira kupinda munzvimbo yangu tsvene.”’ 10 “‘Kana vari vaRevhi vaya vakatsauka vachienda kure neni+ pakatsauka vaIsraeri vachitevera zvidhori zvavo zvinosemesa,* vachatambura nemhaka yezvakaipa zvavakaita. 11 Vachashumira munzvimbo yangu tsvene vachiona nezvemagedhi etemberi,+ uye vachiita mabasa epatemberi. Vachauraya zvibayiro zvinopiswa nezvimwewo zvibayiro zvinounzwa nevanhu, uye vachamira pamberi pavo vachivashumira. 12 VaIsraeri pavainamata zvidhori zvavo zvinosemesa, ivo vakavashumira vakaita kuti imba yaIsraeri itadze,+ ndokusaka ndakavasimudzira ruoko rwangu ndichipika,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘uye vachatambura nezvakaipa zvavakaita. 13 Havazouyi pamberi pangu vachishumira sevapristi uye havazoendi pedyo nezvinhu zvangu zvitsvene uye zvinhu zvangu zvitsvenetsvene, uye vachanyara nezvinhu zvinosemesa zvavakaita. 14 Asi ndichaita kuti vave vatariri vemabasa epatemberi, vachiona nezvekushanda kwayo uye zvinhu zvese zvinofanira kuitwa mairi.’+ 15 “‘Kana vari vapristi vedzinza raRevhi, ivo vanakomana vaZadhoki,+ avo vaiita mabasa emunzvimbo yangu tsvene pakatsauka vaIsraeri,+ vachauya pamberi pangu vachindishumira, uye vachamira pamberi pangu kuti vandipe mafuta+ neropa,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 16 ‘Ndivo vachapinda munzvimbo yangu tsvene, uye ndivo vachaenda patafura yangu kuti vandishumire.+ Vachaita mabasa avanofanira kundiitira.+ 17 “‘Pavanopinda mumagedhi echivanze chemukati, vanofanira kupfeka nguo dzejira.+ Havafaniri kupfeka zvinhu zvakagadzirwa nemvere dzemakwai pavanoshumira mumagedhi echivanze chemukati kana kuti muchivanze chacho. 18 Vanofanira kupfeka ngowani yejira* mumusoro, uye vanofanira kupfeka zvikabudura zvejira.+ Havafaniri kupfeka zvinhu zvinoita kuti vabude ziya. 19 Vasati vabuda kuchivanze chekunze, iko kuchivanze chekunze kune veruzhinji, vanofanira kubvisa nguo dzavo dzavanenge vachishumira nadzo,+ vodziisa mudzimba tsvene dzekudyira.+ Vanofanira kubva vapfeka dzimwe nguo, kuti varege kuita kuti vanhu vave vatsvene nenguo dzavo. 20 Havafaniri kuveura misoro yavo+ kana kurega bvudzi ravo richireba. Vanofanira kuridimburira. 21 Vapristi havafaniri kunwa waini pavanopinda muchivanze chemukati.+ 22 Havafaniri kuroora chirikadzi kana mukadzi akarambwa;+ asi vanogona kuroora mhandara pavaIsraeri kana kuti chirikadzi yakasiyiwa nemupristi.’+ 23 “‘Vanofanira kudzidzisa vanhu vangu musiyano wechinhu chitsvene nechisiri chitsvene; uye vachavadzidzisa musiyano wechinhu chisina kuchena nechakachena.+ 24 Ndivo vanofanira kutonga nyaya+ uye vanofanira kutonga vachitevedzera mitongo yangu.+ Vanofanira kuchengeta mitemo yangu nemirau yangu ine chekuita nemitambo yangu yese+ uye vanofanira kutsvenesa masabata angu. 25 Havafaniri kusvika pedyo nemunhu akafa, vachizvisvibisa. Asi vanogona havo kuzvisvibisa kana vari baba vavo vafa, kana amai, kana mwanakomana, kana mwanasikana, kana mukoma kana munin’ina, kana hanzvadzi yavo isati yaroorwa.+ 26 Kana mupristi acheneswa, vanofanira kumuverengera mazuva manomwe. 27 Pazuva raanopinda munzvimbo tsvene, muchivanze chemukati, kuti ashumire munzvimbo tsvene, anofanira kuuya nechibayiro chake chechivi,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 28 “‘Kana iri nhaka yavachawana, ini ndini nhaka yavo.+ Hamufaniri kuvapa nhaka muIsraeri nekuti ini ndini nhaka yavo. 29 Ndivo vachadya mupiro wezviyo,+ nechibayiro chechivi, nechibayiro chemhosva,+ uye zvinhu zvese zvakatsaurwa muIsraeri zvichava zvavo.+ 30 Zvibereko zvakanakisisa pane zvinenge zvatanga kuibva nemipiro yese yamunopa zvichava zvevapristi.+ Uye munofanira kupa vapristi upfu husina kutsetseka hwezvirimwa zvenyu zvinotanga kuibva.+ Izvi zvichaita kuti dzimba dzenyu dzikomborerwe.+ 31 Vapristi havafaniri kudya shiri kana mhuka yakafa yega kana yakabvamburwa nezvikara.’+